Kukosha Kwekutengesa Kugonesa | Martech Zone
Nepo kutengesa kwekugonesa tekinoroji kuchiratidzwa kuwedzera mari ne66%, 93% emakambani haasati aisa nzvimbo yekutengesa inogonesa. Izvi zvinowanzo kukonzerwa nengano dzekutengesa chinogonesa chiri kudhura, chakaomarara kuendesa uye kuve nemitengo yakaderera yekutora. Tisati tapinda mune zvakanakira yekutengesa inogonesa chikuva uye nezvazvinoita, ngatitange tanyura mune izvo zvekutengesa zvinogonesa uye nei zvichikosha.
Zvinoenderana neForrester Consulting, kugonesesa kwekutengesa kunotsanangurwa se:
Maitiro, anoenderera mberi anoshongedzera vese vatengi-vakatarisana nevashandi nekwaniso yekugara uye zvakarongeka vane hurukuro yakakosha neyakagadzika yevatengi vanobatika padanho rega rega revatengi-kugadzirisa matambudziko ehupenyu kutamisa kudzoka kwekudyara kwekutengesa system.
Chii chinonzi "Kugonesa Kugonesa" Uye Forrester Akaenda Sei Nezve Kuzvitsanangura?
Saka izvi zvinorevei chaizvo?
Kana iwe uchifunga nezve yako yekutengesa muchirevo chebhero curve, fungidzira uchifambisa ako epakati vatengesi kubva pasi pebhero curve kuenda kumusoro neako epamusoro vanoita. Chinangwa chekugoneswa kwekutengesa ndechekufambisa ako epakati vatengesi kubva kuzasi kuenda kumusoro kuti vatange kutengesa senge mutambi wepamusoro. Kune vako vatsva kana vevhareji vatengesi, zvinokwanisika kuti havana ruzivo kana charisma yekuita iyo yakakosha-based yekutengesa mharidzo izvo vako vepamusoro vanoita vanoita nevatengi vese. Kuve nekodzero yekutengesa inogonesa tekinoroji panzvimbo inobvumira vatengesi vako vatsva neavhareji kuti vaone zviri kushanda nevatengesi vepamusoro kubatsira kusimudzira kwavo kwevatengesi kubudirira. KuMediafly, tinodaidza shanduko yesangano rekutengesa, Evolve Selling ™.
Nei Uchifanira Kugonesa Kugonesa?
Zvichitaurwa zviri nyore, vatengi vakachinja. Kusvika pa 70% yeruzivo vatengi veB2B vanoona inozvitsvaga online, kwete kupihwa kwavari nemutengesi rep. Kana mutengi achibatana nemutengesi, zvinotarisirwa zvakakwirira. Ivo havadi kunzwa danda pamusoro pechigadzirwa maficha uye mashandiro. Panzvimbo iyoyo, ivo vanotsvaga zvakasarudzika uye kuita zviitiko zvekutenga, zvichivabvumira kuti vanzwisise izvo zvakasarudzika zvinogadziriswa nechigadzirwa kana sevhisi uye kuti zvinovabatsira sei kuzadzisa zvinangwa zvavo zvemari.
Neshanduko iyi pamafambiro emutengi, vatengesi vanofanirwa kupfuura chirevo chePowerPoint chakamira. Pane kudaro, ivo vanofanirwa kuve neiyo tekinoroji kuti vakwanise kumira ipapo, vachipa chaiyo-nguva ruzivo rwekuvaka kuvimba nemutengi wavo uye pakupedzisira, vhara chibvumirano. Kutengesa kugonesa tekinoroji inoita izvo chaizvo.
Sekureva kwaForbes, yekutengesa inogonesa mhinduro ndiyo yepamusoro tekinoroji kudyara yekusimudzira kutengesa kugadzirwa. Mhan'ara data inoratidza izvo 59% yemakambani izvo zvakapfuura zvinangwa zvemari - uye 72% inozvipfuura ne25% kana kupfuura - zvine tsananguro yekutengesa inogonesa basa.
Chii Chaunofanirwa Kuita Yekutengesa Inogonesa Platform?
Kunyange paine zvakawanda zvinogoneka mune yekutengesa inogonesa chikuva, isu, pa Mediafly, tenda iyo yekutengesa inogonesa chikuva inofanirwa kupa vatengesi neinotevera:
Iko kugona kwekutsvaga zvirinani, zvemusoro-zve-zvemukati zvemukati zvinosanganisira mavhidhiyo, maturusi ekudyidzana, masiraidhi ekushandisa mukukurukurirana nevatengi.
Iko kugona kwekukasira pivot mukutengesa kukurukurirana kusangana nezvinodiwa nemutengi, kugadzira ruzivo rwakasarudzika uye rwakasarudzika kumutengi
Anopindirana maturusi anosanganisira ROI, TCO uye kukosha-kutengesa macalculator, uye zvigadzirwa zvigadzirwa, kutora zvigadzirwa kubva kumutengi kubatsira kutungamira zvekutengesa hurukuro
Iko kugona kudhonza chaiko-nguva dhata kubva kwakasiyana masosi, kubatsira kugadzirisa matambudziko akasarudzika emutengi
Dhata uye analytics pamusoro pekuti zvirimo zvirikuita sei, mutengi-akasarudzika dhata-inotungamirwa nzwisiso yekufambisa madhiri kumberi uye ruzivo rwekuti zvirimo zviri kuburitswa sei nekutengesa uye kudyiwa netarisiro
Kubatanidzwa neCRM kubatsira zvisina basa kugadzira musangano wekutevera mameseji uye zvinyorwa zvekushandisa zvakashandiswa mumisangano yapfuura
Aya kugona kunoisa vatengi chero padanho kumusoro kuti vabudirire. Nehurombo, yekutengesa inogonesa tekinoroji inowanzoonekwa seinodhura, yakaoma uye ine njodzi. Asi hazvifanirwe kudaro. Mapoka ese ekutengesa kana masangano ekutengesa ari parwendo rwavo rwekutengesa kugonesa. Pasina rwendo rwakafanana, masangano anofanirwa kutora nguva yekushanda pamwe neyavanotengesa vanogonesa mupi kuti vagadzire chikuva chakanangana nezvinodiwa nesangano ravo.
Recently, Mediafly kuwanaitsvuku iPresent kubatsira kupa kutengesa kugonesa kune vese. Kubudikidza nekutora uku, isu tinokwanisa kuendesa yakajairika uye isinganetse yekutengesa inogonesa mhinduro kumabhizimusi ehukuru hwese, kubvisa bhizimusi-chikamu mutengo uye kugadzirisa zvipingamupinyi makambani mazhinji anonzwa kutya kana achitenga yekugonesa yekugonesa tekinoroji.
Kana iwe uchikakavadzana nekutenga yekutengesa inogonesa tekinoroji asi une hanya nezvekuitwa, kuzvipira kwenguva, nezvimwe. tora matanho madiki kune chako chinangwa. Nguva dzose yeuka urwu rwendo. Nekubatanidza yekutengesa inogonesa tekinoroji, unogona kumira kutarisa ako epakati vatengesi vachinetseka kuzadzisa zvinangwa zvavo uyezve, tarisa rako rese rekutengesa timu ribudirire.
Tags: zvirimo kuitacrm kusanganamediaflyzvigadzirwa zvigadzirwazvekutengesa zvemukatikutengesa zvemukati mashandirohurukuro dzekutengesaKugonesa Kugonesa
Maitiro Ekuita Vatungamiriri Anogona Kukwirisa Dhata Ongororo Kuti Iwedzere Kugonesa